Nagu saabsan - Zhongnan Soo Dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Zhongnan Import and Export Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2011 waxayna ku taalaa magaalada Yiwu, Shiinaha, magaalo caan ka ah badeecooyinka yar yar ee aduunka caan ka ah. Shirkaddu waxay ka kooban tahay Wasaaradda Ganacsiga Dibadda, Waaxda Dukumintiga iyo Waaxda Bakhaarrada. Waxay inta badan ku hawlan tahay dhammaan soo-dejinta iyo dhoofinta ganacsiga la xiriira, iyadoo la siinayo tarjumaadda Isbaanishka iyo Ingiriiska, iyo sidoo kale dhammaan hababka ganacsi ee shisheeyaha ee soo iibsashada shisheeyaha, kormeerka, iyo shixnadaha Shiinaha. Macaamiisha weheliso dhammaan nidaamka wax iibsiga ee dhammaan gobollada Shiinaha, uruurinta iyo kaydinta shixnadaha, hubi qaabka iyo tayada, hubi tayada iibsiyada macaamiisha, iyo taageerida koritaanka macaamiisha si loo gaaro kobaca labada dhinac.
Qalabka xafiiska, qalabka, alaabta carruurtu ku ciyaarto, dukaamada waaweyn, sahayda fasaxa, hadiyado hal abuur leh, alaab elektaroonig ah, mashiinno, iwm
Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabda'a "daacadnimada ku saleysan, sumcadda ugu horreysa" iyo dabeecadda adeegga wanaagsan, waxayna sumcad iyo sumcad ku dhex yeelatay ganacsatada ajnabiga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha. Ka dib 10 sano oo horumar ah, laga bilaabo macmiilkii ugu horreeyay illaa hadda, macaamiisha waxay ku yaalliin Peru, Bolivia, Mexico, Argentina, Colombia iyo dalal kale oo badan oo Koonfurta Mareykanka ah.
Waxaan si diirran kuugu soo dhoweynaynaa adduunka oo dhan inaad nagu soo biirto oo aan isla korno!
Shirkaddu waxay leedahay koox horumarineed oo tiknoolajiyad aqoon sare leh aqoon xirfadeed leh iyo khibrad R&D qani ku ah dhinacyada shabakadaha iyo teknolojiyada isgaarsiinta, codsiyada keydka xogta ballaaran, iyo koox adeeg xirfadleyaal ah oo leh tayo wanaagsan si loo siiyo dowlad iyo macaamiil ganacsi oo tayo sare leh. . Kooxda adeegga.
Shirkaddu waxay diiradda saaraysaa xoojinta hordhaca shaqaalaha iyo tababarka iyo iskaashiga shaqaalaha jira. Marka la eego qorshaha horumarinta shirkadda, shirkaddu waxay sii wadaa soo-jiidashada iyo kordhinta shaqaalaha farsamada ee shirkadda, si saamiga shaqaalaha farsamada ee shirkaddu u sii kordho, ugu dambayntiina ay gaarto in ka badan 50%. Isla mar ahaantaana, waxay xoojinaysaa tababbarka shaqaalaha jira. Marka loo eego baahida shirkadda iyo horumarka shaqsiyadeed, shirkaddu waxay siisaa shaqaalaha fursado tababar. Mid ka mid ah waa in si joogto ah loo hagaajiyo awoodaha farsamo iyadoo loo marayo barashada iyo ka shaqeynta shirkadda dhexdeeda, isla mar ahaantaana loo qabto tababaro dibadeed shaqaalaha aqoonta u leh. In kor loo qaado awooddooda horumarinta tikniyoolajiyadda. Taageerada xitaa waxaa lagu bixiyaa waxbarashada tacliinta. Isla mar ahaantaana, waxay bixisaa beddelaad wanaagsan oo ku saabsan mushaharka, guriyeynta iyo daryeelka, waxayna soo dhaweyneysaa kartida ku biirista shirkadda.
Toban sano ka dib markii la aruuriyay iyo toban sano oo horumar ah, shirkaddu waxay leedahay boqolaal kun oo macaamiil ah. Intii ay horumarinaysay ganacsigeeda aasaasiga ah, shirkaddu waxay xawaareyneysaa isbeddelkeeda, waxay dardargelineysaa horumarinteeda kaladuwan, waxayna si firfircoon u dhiseysaa barmaamij casri ah oo e-commerce ah oo buuxiya astaamaha warshadaha adeegga casriga ah
Waxaan ku takhasusay Soo-saarista Wax-soo-saarka, Xog-ururinta & Hanuuninta Suuqa, Bixinta Muunad, Amarka Wehelinaya, Amarka La-socoshada, Xakamaynta Tayada, Lacag-bixinta Bixinta, Bakhaarrada, Dhoofinta iyo dukumintiyada dhoofinta ee khuseeya iwm. toos ula xiriir warshadaha si aad macaashkaaga ugu badiso.